Afar Kooxood Oo Ka Mid Kooxaha Waa Wayn Ee Premier League Oo Liverpool Kula Soo Biiray Tartanka Benjamin Bourigeaud. - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
June 24, 2019 at 07:01 Afar Kooxood Oo Ka Mid Kooxaha Waa Wayn Ee Premier League Oo Liverpool Kula Soo Biiray Tartanka Benjamin Bourigeaud.2019-06-24T07:01:23+01:00 CAYAARAHA
Kooxda Liverpool ayaa xiisaynaysa saxiixa xidiga reer Spain ee Benjamin Bourigeaud kaas oo xili ciyaareedkii dhamaaday isku soo muujiyay kooxda Rennes laakiin afar ka mid ah kooxaha ay Reds ku xifiltamaan Premier league ayaa tartanka kula soo biiray.
Benjamin Bourigeaud oo 25 sano jir ah ayaa bandhig fiican ku soo sameeyay kooxda reer France ee Rennes wuxuuna soo jiitay xiisaha kooxda Liverpool laakiin hadda dagaalka ayaa noqday mid shan geesood ah.
Wargayska Estadio Deportivo oo dalka Spain laga leeyahay ayaa shaaciyay in xidiga dalkooda ee Benjamin Bourigeaud ay Liverpool kula soo biireen kooxaha Manchester United, Arsenal, Tottenham iyo Chelsea.
Kooxaha waa wayn ee Premier league ayaan ahayn kooxaha kaliya ee xiisaynaya Benjamin Bourigeaud wuxuuna soo jiitay indhaha kooxo kale oo Yurub ah waxaana jirta sabab ay kooxo badani xidigan u xiisaynayaan.
Qiimaha hoose ee lagu iibsan karo Benjamin Bourigeaud iyo tayadiisa ciyaareed ayaa keenay in ay kooxo badani saf u soo galaan.
Kooxda Sevilla ayaa haddaba laga soo diiday dalab 12 milyan yuro ahaa oo ay ku doonayee in ay kooxhaa kale ugaga hor maraan saxiixa Benjamin Bourigeaud.
Wararka laga helayo dalka Spain ayaa sheegaya in kooxda Rennes ay xidigan ku doonayso 18 milyan gini oo u dhiganta 20 milyan yuro taas oo lacag ka badan intii markii hore la filayay in Benjamin Bourigeaud lagu heli karo oo ahayd 13 milyan gini oo u dhiganta 15 milyan yuro.
Kooxaha Juventus, Napoli, Roma iyo labada Milan ayaa ka mid ah kooxaha xiisaynaya saxiixa Benjamin Bourigeaud wuxuuna si lama filaan ah u noqday mid ka mid ah ciyaartoyda loogu doonista badan yahay kooxaha Yurub.
Benjamin Bourigeaud ayaa xili ciyaareedkii dhamaaday kooxdiisa Rennes waxa uu u soo dhaliyay 6 gool wuxuuna soo sameeyay 5 gool caawin wuxuuna khadkan dhexe hadda helayaa xiiso badan oo kooxaha Yurub ugu waa wayn uga imanaya.
Si kastaba ha ahaatee, Liverpool oo markii hore ahayd kooxda loo saadaalinayay in ay ku guulaysanayso Benjamin Bourigeaud oo qiimo hoose lagu heli karo marka tayadiisa ciyaareed loo qiimeeyo ayaa hadda helaya kooxo badan oo doonaya.
« Sudan’s military rejects Ethiopia’s transition proposal
DFS Oo Shaacisay Waqtiga La Qabanayo Doorashooyinka Galmudug »
Three terror suspects killed, 2 police officers injured in Lamu IED explosion
Viral FaceApp challenge ‘forbidden’, Muslim scholar says